ငွေလမင်း: “တင်လေအထူး ၊ သူ့ကျေးဇူး ၊ မချေဖျက်မှိ ပါစေသော် ”
Posted by ငွေလမင်း at 1:02 PM
ပါသဗျ...။မွေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခွေးတွေလည်း အများကြီးဗျ...။
ခွေးလေး တွေ ကိုချစ်တတ်တဲ့ ငွေလမင်း ကျန်းမာချမ်းသာ ပါစေ
တို့ကလည်း ကြောင်ထက် ခွေးကိုပိုသဘောကျတယ်
ခွေးဆိုတာ သစ္စာရှိတယ် သခင်ကို သခင်မှန်းသိတယ်.
ကြောင်က လူတွေအနားပိုနေရပေမဲ့ သာတဲ့အချိန်သာ အိမ်မှာရှိတတ်ပြီး အိမ်မှာ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ၊ နာရေးပေါ်လာတာမျိုးဆို ထွက်ပြေးတတ်တဲ့ စရိုက်မျိုးရှိတတ်တယ်..
ခွေးတွေတောင် သစ္စာရှိမှန်း သိတတ်ရင် ခွေးထက်အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ လူတွေလဲ သစ္စာပိုရှိသင့်တာပေါ့နော်။
ငွေလမင်း သားအမိ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျား။
ဒီပို့စ်ကိုဖတ်တော့ မွေးခဲ့တဲ့ သူတို့တွေကို သတိရမိပါတယ်။
ကျနော်ကလည်း ခွေးကို အတော်ချစ်တတ်သလောက် ကြောင်ကို မစားရ ညောင် ညောင် ၊ စားရ ညောင် ညောင် ကြောင့် မချစ်ဘူး။
အိမ်မှာလည်း “ ရန်နိုင် ၊ ရန်ရှင်း ” ဆိုတဲ့ ခွေးညီအစ်ကို မွေးဖူးတယ်။ အတော်ကို သိတတ်တဲ့ ကောင်တွေဗျာ။
သူ့တို့ အကြောင်းကို ကျနော် ပို့စ်ပေါင်းများစွာ ၊ ကဗျာတွေ များစွာ ရေးထားဖူးပါတယ်။ နောက်လည်း ရေးစရာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။
ခွေးဆိုတာ အနီးကပ်နေဖူးလေ သိသာလေပဲ။ အတော် ချစ်ဖို့ ကောင်းတာဗျာ။
ဆရာလုပ်တယ် လို့တော့ မထင်စေချင်ဘူး။
လူဆိုတာ ဘယ်သူမဆို သုညက စကြရတာ မဟုတ်လား။ ဒီလိုပဲ လေ့လာမေးမြန်းရင်း သင်ယူရတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်လည်း ဒီလိုပါပဲ။
ပို့စ်တွေကို Word ထဲမှာ အရင် ရေးပြီးမှ Copy ကူးပြီး တင်တယ် လို့ ထင်တယ်။ ဒီအတိုင်း Paste လုပ်ပြီး တင်လိုက်ရင် စာတွေက အခုလို တစ်ကြောင်းနဲ့ တစ်ကြောင်း ကပ်နေတတ်တယ်။ ဒါကို တင်မယ် ဆိုရင် Edit HTML ကို ပြောင်းပြီးမှ Paste လုပ်ပါ။ ပြီးမှ Compose ကို ပြန်ပြောင်းပြီး စာတွေကို ညှိလိုက်ပါ။ ဒါဆိုင်တော့ ပို့စ်တင်လိုက်တဲ့ အခါမှာ စာလုံးတွေက အခုလို မကပ်တော့ပဲ ညီသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် လှလှပပ စာတစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
( စမ်းလုပ်ပြီးလို့ အဆင်ပြေပြီ ဆိုရင် ဒီစာကို ဖျက်လိုက်လို့ရပါတယ်။ မျှဝေတဲ့ သဘောပါပဲ။ )
တိရစ္ဆာန်ကို မချစ်တတ်ဘူး...လူတော့ လေပါတီမမြရင်သီချင်းလို တနာရီထဲ...
အော် လက်စသတ် မစ္စငွေလမင်းနဲ့ မစ္စတာငွေလမင်းက သားအမိကို ဟိုတစ်ခါကျတော့ ဖေဖေငွေလမင်း သမီးငွေလမင်း ဖတ်ရင်းကို လ ကမ္ဘာကို ရောက်နေသလို လည်နေပြီ။ အဲနှစ်ယောက် ကို အိမ်က အမေနဲ့ အတူထားရင်ကောင်းမယ် အိမ်က မယ်တော်ကြီးကလဲ ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စားပြီး ခွေးကျွေးသေးတာ။ သူကတော့ ခွေးချစ်သလား ဘာလားကိုယ်လဲ သေချာ မမေးမိဘူ။ အနော်ကတော့ ပထမ ချစ်သလိုလိုနဲ့ နောက်တော့ မချစ်သလိုလို ပဲ။ ရွာသားလေ။ အိမ်ရှေ့မှာ ကွပ်ပျစ်ရှိတယ်။ မြန်မာကားထဲကလို အိမ်သပ်သပ် ကွက်ပျစ် သပ်သပ်မဟုတ်ဘူး တစ်ဆက်တည်း။ ခွေးက ၈ ကောင် ကိုးကောင် ချိဒယ်။ ဘာတဲ့ နက်မ ၊ဂျားမ (ကျားမ)။အောင်နက် ၊ ဖြူလုံး။ ငညို ၊ ပိန်းသေး။ ဘာတွေမှန်းကို မသိဘူး အမေပေးထားတာ တော်သလင်းဆို ချိတ်ညစ်တယ် ပြီးရင် မွေးပြန်ရော ကျွေးရတယ် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးရတယ်။ ဖိနပ်တွေ ပြန်လိုက်ရှာရတယ်။ တော်တော် ရှုပ်တဲ့ကောင်တွေ မွေးသမိခင် မျက်နှာကြောင့် ကြည့်နေတာ လစ်ရင် လစ်သလိုတော့ ကစ်ပေးလိုက်တယ်။
ခွေးတွေဟာ လူနဲ့အနီးစပ်ဆုံးပါပဲ. ကိုယ့်သခင်အပေါ် တော်တော်လည်း သစ္စာရှိကြပါတယ်။
ဇေရေ ဖောင့်တွေဆက်နေတယ် လိုင်းစပေ့ဇင် ပြင်လိုက်ဦးနော်
ကြုံရင်ခွေးသက်တန်းလေးရေးပေးပါဦး၊ ၇၀ နှင့် ၈ ဆိုတော့ ဘယ်လိုတွက်?